Ndebanye aha akwụkwọ akụkọ na profaịlụ Twitter bụ mmeri maka ndị na-ere ahịa email na ndị debanyere aha | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 7, 2021 Tọzdee, Ọktoba 7, 2021 Kelsey Seber
Ọ bụghị ihe nzuzo na akwụkwọ akụkọ na -enye ndị na -emepụta ihe ahịrị nkwurịta okwu na ndị na -ege ha ntị, nke nwere ike iweta mmata na nsonaazụ dị ịtụnanya maka obodo ma ọ bụ ngwaahịa ha. Agbanyeghị, iwulite ndepụta email ziri ezi nwere ike iwepụta oge na mbọ dị ukwuu maka onye zitere ya na onye nnata ya.
Maka ndị na -eziga, omume kacha mma dị ka ịnweta ikike ndị ọrụ ịkpọtụrụ, ịkwado adreesị ozi-e site na ịbịaru otu ma ọ bụ ugboro abụọ na ịdebe listi email gị ka ọ dị ọhụrụ niile nwere ike bụrụ nnukwu oge. Ọ na -ewe oge na nnwale na njehie iji chepụta ihe kacha mma maka itolite ndepụta email gị.
Agbanyeghị, ihe adịghị adịrị ndị ọrụ mma, ma. Ịdenye aha na listi email na -ebughị ụzọ zụrụ ngwaahịa ma ọ bụ mepụta akaụntụ na -apụtakarị ịkpaghasị ihe ha na -eme. Cheedị echiche nke a: ị na -enyocha ekwentị gị ma ọ bụ laptọọpụ iji nweta akụkọ gị mgbe ị hụrụ isi akụkọ kachasị amasị gị dị n'ụdị email kwa ụbọchị. Ịchọrọ ịnweta ozi ozugbo na igbe mbata gị, yabụ ị pịa njikọ ahụ. Mgbe atụgharịrị gị na njikọ saịtị akụkọ, ị ga -achọpụtarịrị ebe ị ga -edebanye aha maka ozi ịntanetị. A na-enye ndebanye aha na igbe mmapụta? Ma ọ bụ ọ dị na igbe nwere agba dị na ala peeji? Mgbe ịchọpụtachara ebe a (yana ijikwa ka isi akụkọ ọzọ ghara ịdọpụ uche gị), ị tinye adreesị email gị, chọpụta na ị bụghị robot, wee pịa nkwenye gị ịdenye aha.
Obi dị m ụtọ na n'oge adịghị anya, a ga -eme ka usoro a dị mfe ma dịkwa mfe ịnweta maka ndị ọrụ njedebe na ndị na -ahụ maka iwepụta ndepụta email.
Nyochaa site na Twitter
N'oge ọkọchị a, Twitter bidoro ịgba ndị ọkwọ ụgbọala gam akporo ọkwọ ụgbọelu. Ụlọ ọrụ ahụ agbakwụnyela ihe ọhụrụ na profaịlụ onye ọrụ nke na -enye onye ọrụ ohere ịnweta ngwa ngwa review, ikpo okwu akwụkwọ akụkọ Twitter nwetara na Jenụwarị. N'ime onye ọkwọ ụgbọ elu a, mgbe ndị ọrụ mepere profaịlụ Twitter nke onye okike ma ọ bụ akara kachasị amasị ha, ịdebanye aha n'akwụkwọ akụkọ Revue ha bụ naanị okwu ole na ole - a ịdenye aha Pịa, nkwenye nke email ha na-ebi na akpaaka (defaulted na email ejikọrọ na akaụntụ Twitter ha) pịa, yana ịpụ na Nke a na -ebipụ ọtụtụ usoro etiti usoro ịdenye aha akwụkwọ akụkọ.
Otu akụkụ kachasị mma nke atụmatụ a bụ na ndị ọrụ ekwesịghị ịhapụ ikpo okwu mgbasa ozi mmekọrịta site na njikọ na -atụgharị ha. Ọ bụrụ na ọ dị mfe ime, ndị mmadụ nwere ike itinye aka. N'echiche a, inye ndenye aha gị n'akwụkwọ akụkọ gị dị ka onye na -ere ahịa na ịchọta ọdịnaya ịchọrọ dị ka onye ọrụ nwere ike ọ gaghị adị mfe.
Mkpokọta akwụkwọ akụkọ Revue ọhụrụ na Twitter ga -abụ nnukwu ihe ịtụnanya maka ụdị abụọ ahụ na ndị na -emepụta ọdịnaya ka ọ na -enye ohere ka ndị fan mepee ụzọ nkwukọrịta ọzọ nke ha nwere ike ha agaghị echebara na mbụ na -enweghị nhọrọ a. Ọ ga-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ Twitter mfe karịa ka ha nwere ikpo okwu guzobere iji tinye ndị fan na-etinyelarị aka na ọdịnaya ha na listi email ha.
Onye na -ewu akwụkwọ akụkọ Revue na -enye gị ohere ibubata nri gị na webụsaịtị gị ka ị nwee ike ịdọrọ na dobe akwụkwọ ozi ndị ị ga -achọ itinye.
Site na ịrị elu nke mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta, ndị ọrụ Instagram achọpụtala ụzọ pụrụ iche iji mee ka akaụntụ Instagram ha rụọ ọrụ na ahịa email. Agbanyeghị, Twitter na -enye ndị ọrụ njikọ ozugbo ịdebanye aha maka ozi ịntanetị nwere ike ịpụta ime ka ọ dịrị ndị okike mfe ịgbanwe ọdịnaya ma ọ bụ ngwaahịa site na nri Twitter ha na igbe mbata nke onye otu obodo ọhụrụ. Njirimara a ga -aba ezigbo uru maka ụdị na ndị okike iji gbanwee mgbasa ozi mmekọrịta ha na -eso ndị debanyere aha, site na mgbe ahụ gaa n'ihu, ha nwere ikike na -enweghị njedebe na otu ha si ahọrọ itinye ego na mmekorita ndị a site na email.
Debanye aha maka Revue n'efu
Tags: email Marketingonye na -ewu akwụkwọ akụkọ n'efualaonye na -ewu akwụkwọ akụkọreviewndenye ahaTwitterndebanye aha email twitter
Kelsey bụ ọkachamara n'ịzụ ahịa obodo nwere nzụlite na mbupụ na teknụzụ. Ọ nọrọ n'ọkwa onye isi na Gator Gaming wee rụọ akụkụ dị mkpa n'ịhazi na ịkwalite asọmpi egwuregwu efu kacha ukwuu na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ United States. Ugbu a ọ bụ onye njikwa ahịa obodo na Ụzọ ụzọ, na -akwalite uto site na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta yana mmemme onye nnọchi anya Maverick.